Duufaan culus oo ku dhufatay Sweden | Somaliska
Duufaan culus oo ku dhufatay Sweden
Duufaan culus ayaa xalay ku dhufatay koonfurta Sweden iyadoo hada ku soo fool leh qeybaha kale ee wadanka. Duufaantaan oo loogu magacdaray Sven ayaa ka soo bilaabatay wadanka Germany, iyadoo cagta soo marisay Denmark iyo koonfurta iyo galbeedka Sweden. Kumanaan guri ayaa koronto la’aan ku dhacday.
Duufaanta ayaa wadata baraf aad u badan iyadoo dadka baabuurta leh looga digay in aysan kaxaysan baabuurta. Tareenada ayaa waxaa ku yimid daahitaan aad u balaaran. Gobolada Skåne, Halland, iyo Bohuslän ayay dabayshu si aad ah u saamaysay. Agagaarka Stockholm iyo bariga Sweden ayaa saamaynteeda laga dareemay Jimcada iyadoo la filayo in ay sii siyaado.
alaha nagu amaansado qof walbe meeshuu joogoo.
wax aqbaar cusub oo laga haayo maleh arintii labada sano ama qof ogolaasho loosoo tuuray ?
Hadla dee dadkii webka miyay ka Guureen Kolay ninka webka leh ayaa khaldan maxaaa yeelay wuxuu gabay hawshiisii intuu dadka is barayay ayuu fikirka dadka la qaadan jiray laakiin hada wuu iska daayay malaha dantiisa ayuu ka gaadhay, somalida diciinimo ayaa lagu yaqaana oo ah in ay hawsha dar dar lasoo galaan kadibana dhuuntaan sidaasna waxaa sameeyay Jimcale ninka lagu magacaabo ee webkan iska leh
Ninka aad leeday hawshiisa ayuu gabay ma lacag ayaa lagu siyaa, kaliya wuxuu caawiyaa oo wixi soo kordha la qaybasadaa umada somalidaa ee hadalkaaga hagaaji sxb.
ILLAHAY ha nagu ilaashada meelwaloo ay islaam iyo umadiisuba jogaan
Ileeye horta sida Somaliland boy uu soo qoray aniga cidna hawl iima dirsan ee aniga ayaa isku xilqaamay in aan boggaan sameeyo 3 sano ka hor ilaa iyo hadana waxaan u wadaa sidii aan u bilaabay. Arinta ku saabsan suaalaha iyo jawaabaha mar hore ayaan soo qoray in aan iska dhaafay sababtanu waa in aanan jawaab u hayn suaalaha shaqsiyaadka ee dadku ay i waydiinayaan. wixii soo baxa ee quseeya soomaalida waxaan balan qaaday in aan soo qorayo.
Shalaydaan ayay ahayd markaan la kulmay qareen u dooda arimaha qoysaska iyo qaxootiga oo ii balan qaaday in ay soomaalida caawin doonto. intaas waxaan u sameeyaana waa in aan dadka caawiyo ee cid aan magac iyo munaafac kaga raadsanayo ma jidho.
JIMCAALE sxb waxaa ku dhihi lahaa lagu wada amaani maaye yaan lagu wada nicin .
Jimcaale sxb la,aantaa webku ma Nuuraayo ee Fadlan waanu kuu xiisnee soo celi sidii wanaagsanyd ee aad wax noola Discus garayn jirtay, waayo wax waliba xog waraysi kama soo hadhaan.
Jimcaale aadbaad u mahadsanatahay shaqada fiican ee mutadawcnimada aad haysana waan kuu qirsanahay laakiin waxaan aad uga helay sidii aad uga qayb qaadan jirtay xogaha laisku dhaafsan jiray webkaagan, markaas waxaan jeclaan lahaa in aad soo celiso taasi. suaalaha kolay aanad ka jawaabi karina khasab maaha in aad ka jawaabto, kolay khibarad uunbaad nagu soo kordhinaysaa ee fadlan soo celi mahadsanid.
asc dhamaan muslimiinta ilaahay waxaan ka baryayaa inuu naga badbaadiyo duufaanada socda iyo shar oo dhanba dhianaca kale jimcaale runtii waxaan u hayaa abaal weyn waayoo tan iyo markaan africa joogay ayaan kala socon jiray halkan somaliska arimaha dacawada ku saabsan ilaa hadana waan kala socdaa jimcaale walaal jazadaada janada allaha kaaga dhigo dadaalkana halkaaga kasii wad una dulqaado dadku koley kumawada amaanayaan akhristayaashana mid ayaan oran lahaaa taasoo ah inaan u mahadcelino walaalkeena jimcaale isla markaana aan sugnaa akhbaaraadka illeen hal maalin lama soo wada helayee mahadsanidiin.